Ɔde Kɔmaa Galatifo 4:1-31
Wɔnyɛ nkoa bio, wɔyɛ mma (1-7)
Ná Paul suro ma Galatifo no (8-20)
Hagar ne Sara gyina hɔ ma apam abien (21-31)
Yerusalem a ɛwɔ soro no yɛ yɛn maame, ɛde ne ho (26)
4 Afei nea meka ne sɛ, sɛ obi a odi ade* yɛ abofra ketewa a, ɛmfa ho sɛ ɔyɛ nneɛma nyinaa wura no, nsonsonoe biara nna ɔne akoa ntam, 2 na mmom mmofra so ahwɛfo ne afiehwɛfo na wɔkyerɛ no nea ɔnyɛ kosi da a n’agya ahyɛ ato hɔ. 3 Yɛn nso, bere a yɛyɛ mmofra no, wiase no nneɛma hunu de yɛn yɛɛ nkoa.+ 4 Nanso bere a wɔahyɛ no soe pɛpɛɛpɛ no, Onyankopɔn somaa ne Ba ma ɔbea woo no+ wɔ mmara ase+ 5 sɛ ɔmmɛtɔ wɔn a wɔwɔ mmara ase+ no, na Onyankopɔn de wɔn ayɛ ne mma.+ 6 Na esiane sɛ moyɛ Onyankopɔn mma nti, wasoma ne Ba no honhom+ aba yɛn komam,+ na ɛteɛm sɛ: “Abba!”* kyerɛ sɛ, “Agya.”+ 7 Enti wonyɛ akoa bio, na mmom woyɛ ɔba; na sɛ woyɛ ɔba de a, ɛnde na wonam Onyankopɔn so yɛ obi a odi ade* nso.+ 8 Nanso bere a na munnim Onyankopɔn no, moyɛɛ nkoa maa wɔn a wɔnyɛ anyame. 9 Na afei a moabehu Onyankopɔn, anaasɛ afei a Onyankopɔn ahu mo yi, adɛn nti na moresan akɔyɛ nneɛma hunu+ a mfaso biara nni so, na mopɛ sɛ ɛde mo yɛ nkoa bio?+ 10 Nna ne abosome ne mmere ne mfirihyia na mudi no frenkyemm.+ 11 Misuro sɛ ɔkwan bi so no, mabrɛ mo ho kwa. 12 Anuanom, mesrɛ mo, monyɛ sɛ me, efisɛ me nso bere bi na mete sɛ mo,+ na bere a mebaa mo nkyɛn no, moanyɛ me bɔne biara. 13 Nanso munim sɛ honam mu yare bi nti na bere a edi kan no, minyaa kwan kaa asɛmpa no kyerɛɛ mo. 14 Ɛwom, nea ɛyɛɛ me ɔhonam mu no, na ɛyɛ sɔhwɛ ma mo, nanso moammu me animtiaa anaa moammu me sɛ atantanne;* mmom no mugyee me sɛ Onyankopɔn bɔfo, mugyee me sɛ Kristo Yesu. 15 Anigye a na mowɔ no afa he? Efisɛ migye di paa sɛ, munyae a, anka mubetutu mo aniwa mpo ama me.+ 16 Nokware a meka kyerɛ mo nti madan mo tamfo anaa? 17 Wɔn ani abere pɛ sɛ wonya mo kɔ wɔn afã, nanso ɛnyɛ adwempa ntia; mmom wɔpɛ sɛ wɔsɛe me ne mo ntam, na ama moakodi wɔn akyi. 18 Nanso sɛ obi kura adwempa na ɔpɛ sɛ mo ne no yɛ baako a, asɛm biara nni ho; mmom ɛsɛ sɛ ɔyɛ saa bere nyinaa, na ɛnyɛ bere a mewɔ mo nkyɛn nko. 19 Me mma nkumaa,+ mo nti mete yaw te sɛ ɔbea a awo aka no, na yaw no bɛkɔ so akosi sɛ mobɛyɛ sɛ Kristo. 20 Me yam a, anka saa bere yi mewɔ mo nkyɛn rekasa ɔkwan foforo so, efisɛ mo nti, minhu nea menyɛ. 21 Mo a mopɛ sɛ mudi mmara no so no, monka ma mintie, munnim nea Mmara no aka? 22 Wɔakyerɛw wom sɛ Abraham woo mma mmarima baanu, ɔbaako yɛ abaawa no ba,+ na ɔbaako yɛ ɔbea a ɔde ne ho no ba;+ 23 sɛnea wɔwo abofra biara no, saa na wɔwoo abaawa no ba no;*+ ɔbea a ɔde ne ho no ba no de, wɔnam bɔhyɛ so na ɛwoo no.+ 24 Eyinom nyinaa gyina hɔ ma biribi; mmea yi gyina hɔ ma apam abien, baako fi Sinai Bepɔw+ so, na saa apam no mma yɛ nkoa; ɛte sɛ Hagar. 25 Hagar gyina hɔ ma Sinai+ bepɔw a ɛwɔ Arabia, na ɛte sɛ Yerusalem a ɛwɔ hɔ nnɛ, efisɛ ɛne ne mma yɛ nkoa. 26 Nanso Yerusalem a ɛwɔ soro no de, ɛde ne ho, na ɛno ne yɛn maame. 27 Na wɔakyerɛw sɛ: “Obonin a wonwo, ma w’ani nnye; ɔbea a wonte awo yaw, fa anigye teɛm; efisɛ ɔbea a wɔapo no no mma dɔɔso sen nea ɔwɔ kunu no de.”+ 28 Anuanom, mo de, moyɛ bɔhyɛ mma te sɛ Isak.+ 29 Abofra a wɔwoo no sɛnea wɔwo abofra biara no,* sɛnea ofii ase teetee nea wɔnam honhom so woo no no,+ saa ara na ɛnnɛ nso ɛte.+ 30 Nanso, dɛn na Kyerɛwsɛm no ka? Ɛka sɛ: “Pam abaawa no ne ne ba no, efisɛ abaawa no ba no, ɔne ɔbea a ɔde ne ho no ba ntumi mmom nni ade.”+ 31 Enti anuanom, yɛnyɛ abaawa mma, na mmom yɛyɛ ɔbea a ɔde ne ho no mma.
^ Anaa “ɔdehye.”
^ Anaa “moantew me so ntasu.”
^ Nt., “ɔhonam kwan so na wɔwoo no.”
^ Nt., “ɔhonam kwan so no.”